HR သင်တန်း | အိန္ဒိယတွင်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်သင်တန်းများ - ၎င်း၏ TechSchool
တစ်ဦးကလက်မှတ်ရ Be HR အထွေထွေ
တစ်ဦးကလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်သင်၏အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတစ်ခုတည်းလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါတယ်။လူ့အင်အားအရင်းအမြစ်ထိုကဲ့သို့သောလျော်ကြေး, ငှားရမ်း, စွမ်းဆောင်ရည်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအဖြစ်ကလူနှင့်ဆက်စပ်သောလူအများနှင့်ပြဿနာများကိုအတူဆကျဆံသောအဖွဲ့အစည်း function ကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူ့အင်အားအရင်းအမြစ်စုဆောင်းမှုအထူးကုကုမ္ပဏီ၏အလုပ်အကိုင်နှင့်နေရာချထားလိုအပ်ချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲ။လူ့အင်အားအရင်းအမြစ်ပညာရှင်များအဖွဲ့အစည်းများများစွာသောလူဖြည့်ဆည်းကူညီရည်ရွယ်ချက်များငှားရမ်း, ဝန်ထမ်းဆက်ဆံရေး, သင်တန်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်စပ်လျဉ်း။
ရည်မှန်းချက်များ & ရည်ရွယ်ချက်များ:
အဖွဲ့ဝိညာဉ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အပြန်အလှန်အဖွဲ့ပူးပေါင်းတစ်အသိ Inculcates ။
1. မာစတာသင်တန်းပေး & စည်းရုံးရေးမှူးများ (MTF)
2. လက်မှတ်ထမ်းခေါ်ယူမှု Analyst, (CRA)
3. သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း Psychometric စမ်းသပ်ခြင်း Professional က (CPTP)
4. သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းစွမ်းဆောင်ရည် & ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုရေးသားသူ (CPCD)
5. သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း OD ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေး Professional က (CODIP)
6. သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းအဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးရေး Analyst, (coda)
7. လက်မှတ်ရသင်ယူနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ Manager ကို (CLDM)
8. လက်မှတ်ရပညာပေးဒီဇိုင်နာ (CID)
9. သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း HR စီးပွားရေးမိတ်ဖက် (CHRBP)
10 ။ HR Analytics မှခုနှစ်တွင်လက်မှတ်ရ Professional က (Champs)
11 ။ လက်မှတ်ရအလုပ်အမှုဆောင် & ဘဝကနည်းပြ (CELC)
12 ။ သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း Balance ရမှတ် Card ကို Professional က (CBSCP)
1 သင်တန်းမှ dedicated 1
ဆန်းသစ်နည်းပညာ Solutions 1 သင်တန်းနည်းစနစ် ON 1 ဆက်ကပ်အပ်နှံတစ်ဦးချင်းစီကျောင်းသားများအတွက်သင်တန်းများကို & အချိန်ဇယား၏ 100% စိတ်ကြိုက်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဆန်းသစ်နည်းပညာ Solutions လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကျောင်းသားတွေကိုစာသင်ခန်းလေ့ကျင့်ရေးရင်ဆိုင်ဖို့မျက်နှာပေးပါသည်။
၎င်းတို့အားသင်သည်သင်၏အဆင်ပြေ & နှစျသိမျ့သေချာအကျွမ်းတဝင်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့ဝန်းကျင်မှာရှိစေလော့ On-site ကိုသင်တန်းလေ့ကျင့်ရေးစည်းရုံးရေးအတွက်အထူးပြုသည်။
နည်းပြ Led အွန်လိုင်း
နည်းပြ Led အွန်လိုင်းသင်တန်းသင့်အိမ်, ရုံးသို့မဟုတ်သင့်ရွေးချယ်မှုမဆိုဝုဏ်၏နှစ်သိမ့်ကနေသင်ယူဖို့အရှိဆုံးအဆင်ပြေလမ်းဖြစ်ခိုင်မာသွား။